XOG-Madaxweyne Axmed Karaash oo Ku Wajahan Furimaha Dagaalka Tukaraq iyo Ciidanka Puntland oo La..
January 11, 2019 puntlandnews Puntland, Wararka Maanta 1
Puntlandnews.net (Garoowe)-Xog hoose oo ay heshay Puntlandnews ayaa sheegaysa in madaxweyne ku-xigeenka cusub ee Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash uu ku wajahan yahay jiidaha dagaalka deegaanka Tukaraq.
Madaxweyne Karaash oo siweyn loogu xusuusto inuu ku sugnaa furimaha dagaalka Tukaraq bilowgii sanadkii dhammaaday ee 2018 isagoo wasiir ah ayaa waxaa lafilayaa inuu kormeero saldhigyada ciidamada Puntland ee aaggaasi.
Wararku waxay sheegayaan in Karaash uu ciidamada u geyn doono sahay muhiim ah si uu ugaga farxiyo ayna uga qayb noqoto dabaal degyada doorashadii madaxtinimada Puntland ee dhowaan ka dhacday magaalada Garoowe.
Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Denni ayaa dhowaan sheegay in dhulka ka maqan Puntland ee gobolka Sool uusan cidna gorgortan kula geli doonin uuna rajaynayo in Muuse Biixi uu isgarto ciidankiisana kala boxo gobolka Sool.
Wasiirka biyaha Somaliland oo ka soo jeeda Sool isla markaana ah difaacaha Muuse Biixi ee arrimaha Sool oo adkaysanaya booskiisa ayaa sheegay in beelaha degan gobolka Sool aysan waxba ka gelin Puntland ayna meeqaamkoodii geeyeen Hargaysa.
Axmad karaash waa madaxweyne ku xigeen ee hadda ma aha madaxweyne.